Uhlaziyo lomfanekiso bhanyabhanya weefoto kuGoogle
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uhlaziyo lweMifanekiso bhanyabhanya yeeFoto zikaGoogle lukhutshwa
& Apos sazi ukusukela ngoFebruwari ukuba uGoogle wayecwangcise ukumilisela isiPhuculo seFoto esitsha kunye nesiphucukileyo, inyathelo elihle lokuyigcina kukhuphiswano neefoto zeICloud. Ngelixa ukuhlekisa kwangaphambili kuthembise uninzi lweempawu zemvelo kunye nokuhlelwa kwevidiyo, uhlaziyo belucotha ekukhupheleni kwizixhobo ze-Android. Abasebenzisi bakaLucky be-Android abafumene uhlaziyo okwethutyana edlulileyo bebekhula apha naphaya, kodwa abantu abaninzi ngoku bafumana izandla zabo kuyo.
Ubomi be-Android yenye yazo, kwaye isivumele ukuba singene kwiinkcukacha zesixhobo esitsha sobugcisa bendalo esifumanekayo kubafoti be-smartphone. Ngoku silima kuzo zombini iifoto kunye neevidiyo, ukuhlelwa kwegranular, kunye nokuninzi kweefilitha ezintsha. Ngokwendalo, ungadlala ujikeleze ngezinto ezinjengokuqaqamba, umahluko, ukugcwala, njl njl. Konke oku hayi kuphela iifoto, kodwa iividiyo zizonke, nazo! Unokuphinda utyale kwaye uzobe isiketshi okanye isicatshulwa esikwividiyo, nangona ibonakala ngalo lonke ixesha levidiyo, kwaye awunako ukuyenza ivele kwizakhelo ezithile.
Ukuze usebenzise amanqaku amatsha okuhlela, iiFoto zikaGoogle ziya kufuna ubuncinci i-Android Version 8.0 kunye ne-3GB ye-RAM kwifowuni yakho, ekungafuneki ukuba ibe ngumcimbi kwizixhobo ezininzi zale mihla.
Ngelixa iifoto ze-iCloud zezona zinto ziphambili kubalandeli beApple, zidityaniswa ngokwendalo kuzo zonke izixhobo zekhamera yeApple (kunye nokuvumela ii-apps zomntu wesithathu ukufikelela ngokulula kwilayibrari yakho yonke ye-iCloud), abasebenzisi abaninzi bebekhetha ukusebenzisa iiFoto zikaGoogle njenge back-up ukhetho lokuvumelanisa lokugcina. Ngelixa iiFoto zikaGoogle zilahlekelwe ngumda wokhuphiswano kwiifoto ze-iCloud kulo nyaka, zigqibile ngesicwangciso sazo sokugcina ilifu simahla (iindlela ezihlawulelweyo ngoku ziqala kwi- $ 1.99 / mo), oku kunokuba kukutyhala okufunekayo ukuze abasebenzisi baqhubeke nokusebenzisa uGoogle & apos; Inkonzo yezithombe.
UGoogle usenomhlaba omninzi wokugubungela ukufikelela kwiifoto ze-iCloud kwidesktop, njengoko usetyenziso lwayo lusizi luswele imowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi. Iyaphumelela kusapho lwayo lokwabelana ngemifanekiso yamathala eencwadi, nangona kunjalo, iapile iApple engenayo. Umsebenzi wayo wokujonga ubuso kwilifu nawo awunakuthelekiswa nanto.
fumana umhla wangoku kwiJava
Umda we-Samsung Galaxy S7 vs Samsung Galaxy S6 Edge +
I-Sprint & apos; I-Samsung Galaxy Tab ye-S6 ifumana uhlaziyo ekudala lulindelwe lwe-Android 11